Kismaayo News » Kumaa labadeena saxan/khaldan?
Kumaa labadeena saxan/khaldan?
Umad waliba waxaay leedahay ujeedooyin, ahdaaf,mabaadi iyo masaalix guud oo u gaar ah islamarkaana mideeya, Sida Diin ama Qadiyad. sidoo kale waxaa jira kala duwanaansho dhanka aragtida ah oo ku wajahan sidii loo gaari lahaa ahdaaftaas iyada ah, Waa taas midda keentay in shucuubta caalamka adeegsadaan waxa loo yaqaano Axzaabta ama xisbiyada faraha badan ee ka jira dalalka aduunka, si nin walba wadaanta u aroorsado asaga oo isticmaalaya aragtidiisa gaar ahaaneed iyo inta la fikirka ah.
Halkas waxaa ka furmaa boga loolanka ama tartanka, dhinacyada siyaasada masiirka umadda isku haya waxaay adegsadaan wixii karaankooda ah, si afkaartooda uga iibiyaan dhinacyada kale oo uu loolanka ka dhexeeyo, iyaga oo ka foojigan in muranka ,loolanka iyo aaraa’da is diidan aaysan marin’habaabinin ama hor istaagin danaha iyo mabaadi’da guud ee asalka ah ama asaaska u ah jiritaanka umadda.
Hadaad u baahantahay awood kugu filan oo aad ku joogteeyso u adeegidda iskuxirnaanta iyo xiriirka bulshadaada, islamarkaana xiriiradu iyo dooduhu u noqon’lahayeen kuwa miradhal ah umadana wax u tara, waxaad u baahantahay inaad aqbasho,qadariso, ra’yiga ama aragtida dhinaca kale.
Marka xiga, waa in hadafkaagu yahay xal u helidda mushkiladaha aloosan iyo sidii loo gaari lahaa xal waara, inaad dooda ku badiso ama ka adkaato dhinaca kale qiimo ma laha.
Waa muhim inaad fahmto dood wanaaga, ilaalinta anshaxa iyo maareeynta habsami u socodka xiriirka ama doodaha.
Taasi waa furaha is’fahamka labada dhinac iyo isu’soo dhawaansho dhanka fikirka ah, waxaa markaa sahlanaanaya in afkaarihii is diidanaa lagu soo koobo ujeedada iyo nuxurka dhabta ah oo ah xal u helidda mushkiladaha aloosan iyo in la bad-baadiyo masaalixda guud ee umadda.
Inta badan waxyaabaha keena mushkiladaha iyo is maan’dhaaf ka ragaadiyay umadeena waa kuwa ka hooseeya mabaadi’da asaasiga ah kuna saleeysan masaalix gaar ahaaneed, iyo loolan ka dhexeeya ashkhaas ama kooxo is cadawsaday.
In la aqbalo xaqiiqada iyo waaqica waa muqadas, Ka meer-meeridda iyo inkiraada jiritaanka ama barashada qofkan ku khilaafsan iyo waxa uu aaminsanyahay, waa waqti lumis.
Xukunka deg-dega ah ama Ka hordhaca xaqiiqada iyo in qofka loo xambaariyo waxuusan aheeyn ama aaminsaneeyn, adiga oo ka duulaya aragtidaada shakhsiyadeed ama kooxeed, lagana yaabo inaad khaldantahay, waa lugooyo.
Tuhunka iyo malo awaalka khiyaaliga ah iyo in xuma iyo khiyaano-umadeed lagu tuhmo qofka kaa fikirka duwan, iyo aniga ayaa saxan dadka kale waa lunsanyihiin, ama waa khaaimiin cadow soo adeegsaday, waxaay abuuraan kala sii fogaansho
In lala coleeytamo qofka kugu khilaafsan ra’yiga, ama laisku deyo in lagu qasbo inuu qaato fikir ka duwan midka uu aaminsanyahay iyada oo la adeegsanayo, naceeyb, cunfi iyo karaahiyo iyo wada kasta, si loogu sanduleeyo aragti gaar ah, guul laguma gaaro.
Isku deyga ama muujinta in mar walba adiga xaqa ku taagantahay adoo aaminsan yadadiilo khiyaali ah oo xaqiiqada iyo waaqica ka fog, sida riyada ah”Mar walba anaga ayaa guuleeysan, kuwa na khilaafsan waa aay khasaari doonaan aduun iyo aakhiro”.
Tacasubka iyo aragtida ku saleeysan hadii aaysan teeyda noqonin!, waa waxyaabaha asalka u ah fashilka Umadda, islamarkaana hortaagan in dhinac uun loo dhaqaaqo.
gebo’gebada qoralkan gaaban waxaan ku soo gunaanadayaa su’aalo dhowr ah:
1. Kumaan ahay aniga, adiga se yaad tahay?
2. Ma cadowbaan ahay mise walaal kaa aragti duwan?
3. Yaa labadeena saxan/khaldan?
4 .Maxaad ku xaqiiqsatay in ra,yigaagu saxan yahay, ma waxyibaa kugu soo dega?
5. Soo ma dhici karto inaan anigu kaa saxanahay?
6. Ma laga yaabaa in beri ka maalin igu waafaqdo/kugu waafaqo aragtida?
7. Ma is dooxnaa, mise ninba qolkiisa ayuu hoosta quful ka saaraa?
8. Xal kale ma jiraa?